Desk ပွဲစားဖြေရှင်းကျော်တစ်ဦး ECN ပွဲစားများ၏အားသာချက်များ | FXCC
Fixed ပျံ့နှံ့ Forex ပွဲစားထရေးဒင်း vs Forex ECN ထရေးဒင်းမော်ဒယ်
ဒါကြောင့်မကြာခဏကျနော်တို့ ECN အကြားခြားနားချက်၏တံခါးသော့ကိုမှတ်ဖျောပွနိုင်ရန်အတွက်, အကောင်းအဆိုး cons ၏ရိုးရှင်းသောစားပွဲပေါ်မှာပြုစုကြပါပြီ "စျေးကွက်ချမှတ်သူများ"? အဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည်သူတစ်ဦး ECN / STP ပွဲစားအကြားအရေးပါသောကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်စားပွဲပေါ်မှာပွဲစားများ, ဘာတွေလုပ်နေလဲ / STP ပွဲစားများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်စားပွဲပေါ်မှာ / ဈေးကွက်အောင်ပွဲစားများ, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းပိုပြီးအသေးစိတ်အတွက်ခြားနားချက်ကိုရှင်းပြနိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်အပိုမိုင်သွားနိုင်စဉ်းစားမိတယ်။
Fixed Spread ပွဲစားပလက်ဖောင်း
ကုန်သည် Forex ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းတွင်, ဖဲဝေသူသည်သင်၏ပွင့်လင်းရာထူး, ကုန်သွယ်စတိုင်နှင့်နည်းဗျူဟာသိတယ်နဲ့သူ့ရဲ့အားသာချက်မှဤသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးနိုင်သည်။
အဆိုပါ FXCC ECN တွင်, သငျသညျဦးဆောင်ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများအားဖြင့်ထုတ်လွှင့်စျေးနှုန်းများအပေါ်ချက်ချင်းရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်။
re-ကိုးကားရိုးရာပြန့်ပွားကုန်သွယ်အတွက်ဘုံဖြစ်ကြသည်။ FXCC re-ကိုးကားမထားဘူး။ protocol ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပလက်ဖောင်းရဲ့နည်းပညာနှင့်တင်းကျပ်သောစျေးနှုန်း / အချိန်ကလက်ရှိစျေးကွက်ပေါက်စျေးမှာသင့်ရဲ့ကုန်သွယ်မှုဖြည့်ဖို့ဒီဇိုင်းနေကြသည်။
FXCC မှာအားလုံး၎င်း၏ client များဆန့်ကျင်ရာထူးယူမထားဘူး။
FXCC မသက်ဆိုင် Forex ကုန်သွယ်မှုအရွယ်အစား client အားလုံး key ကိုစီးပွားရေးလွှတ်ပေးကာလအတွင်းအသစ်ကအမိန့်အတွက်ကုန်သွယ်မှုနှင့်ထားခွင့်ပြုပါတယ်။ ထိုအထုတ်စဉ်အတွင်းနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောစျေးကွက်မတည်ငြိမ်မှု၏အချိန်များတွင်, လေလံ / ကမ်းလှမ်းမှုကိုန့် '' ပုံမှန် '' စျေးကွက်အခြေအနေများစဉ်အတွင်းရရှိနိုင်များထက်ပိုမိုကျယ်ပြန်ဖြစ်ကြသည်။
သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စဉ်းစားပါကုန်သည်များ၏မည်သို့ပင်အမျိုးအစား: ကအလွန်အမင်းအတွေ့အကြုံရရန်ဖြစ်ပါသည်အဖြစ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအချိန်ပြည့်အချိန်, ဒါမှမဟုတ်ဝါသနာရှင်များနှင့်ကုန်သွယ်သက်ဆိုင်တစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိသမျှအတွေ့အကြုံသင့်အဆင့်, ထိုအသစ်သောကုန်သည်များအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်၏ ကုန်သွယ်ဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သဘောထားကိုအမြဲမှတဆင့်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ကုန်သည်ကြီးများအမြဲ, မသက်ဆိုင်ဘဲမူလသူတို့ရဲ့ကုန်သွယ်အတွေ့အကြုံ၏, ထိုအစွမ်းကုန်လုံ့လဝီရိယနှင့်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နှင့်အတူကုန်သွယ်၏စည်းကမ်းချဉ်းကပ်သင့်ပါတယ်။
သင်ရွေးချယ်ပွဲစားအမျိုးအစားကိုသင့်ရဲ့အလားအလာအောင်မြင်မှုအပေါ်တစ်ဦးလေးနက်သက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့အရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးဆက်ဆံရာတွင်စားပွဲပေါ်မှာပွဲစား, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးမျှမဖောက်စားပွဲပေါ်မှာပွဲစားကိုရှေးခယျြသငျ့သလော ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုနှင့်မေးခွန်းနှင့်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်ပြောမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမြင်နှင့်ချဉ်းကပ်နည်းကိုတီထွင်ခဲ့သူအလေးအနက်, ကျူးလွန်ကုန်သည်များ, သာ ECN / STP ကုန်သွယ်မော်ဒယ်အခါတိုင်းရှေးခယျြသငျ့သညျအကြှနျုပျတို့အဘယျကွောငျ့အကြောင်းပြချက်အချို့ဖျောပွပါလိမ့်မယ်။
ပထမဦးစွာ FX ကုန်သည်အများစုနေ့ကကုန်သည်တွေသို့မဟုတ် scalpers များမှာ - အဘယ်သူ၏အရောင်းအစက္ကန့်, မိနစ်, ဒါမှမဟုတ်နာရီကနေကြာရှည်နိုင်ပါတယ်, ဤ FX ကုန်သည်များမရှိသလောက်နေ့ချင်းညချင်း FX အရောင်းအကိုင်ထားပါ။ ဒါကြောင့်သင်ကအစားတင်းကျပ်တဲ့ဖြန့်ရပြီ, ဒါပေမယ့်ကျယ်ပြန့်န့်နှင့် (သီအိုရီ) အဘယ်သူမျှမကော်မရှင်ပေးဆောင်နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦး ECN / STP ပွဲစားတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုနှုန်းကော်မရှင်ပေးဆောင်မည်ဟုရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ရိုးရှင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သင့်သည်။
စားပွဲခုံကုန်သည်များဖြေရှင်းခြင်း, ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စျေးကွက် "စျေးကွက်စေ" ။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ငွေဖြစ်လွယ်သူတို့ဖောက်သည်များ၏ကိုယ်စားပို့ချနေကြသည်လုပ်ငန်းပမာဏအပေါ်အခြေခံပြီး, ဘယ်လောက်ပါးလွှာများပါဝင်သည်နိုင်သည့် (မိမိတို့၏ variable ကိုအခွအေနများစာရင်းကိုပေါ် မူတည်. ) မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဒြပ်စျေးနှုန်းကိုးကားဖို့လွတ်လပ်မှုမှာရှိပါတယ်။ ထိုကြောင့်သူတို့ကိုးကားအတုကိုးကားဖြစ်ကြသည်။
ဖြေရှင်းခြင်းစားပွဲပေါ်မှာန့်မကြာခဏသူတို့ဥပမာ, EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာအပေါ်တဦးတည်း PIP ၏သတ်မှတ်ထားတဲ့ပြန့်ပွားကိုးကားလျှင်ဆွဲဆောင်မှုပေါ်လာနိုင်သည့်, fxed နေကြသည်။ သို့သော်ကုန်သည်များအဖြစ်မှန်သူတို့ပြန့်ပွားနှစျခုမှပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်ငွေပေးငွေယူနှုန်းသုံးခု pips နိုင်အောင်ဝေးစစ်မှန်တဲ့စျေးကွက်ပေါက်စျေးအနေဖြင့်ဖြည့်လျက်ရှိသည်ကြောင်းဆိုလိုတာက slippage နှင့်ဆင်းရဲသောဖြည့်ပါတွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။ အဆိုပါဆက်ဆံစားပွဲပေါ်မှာပွဲစားကိုလည်းအကျိုးဆောင်များအတွက်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းရဖို့ကြိုးပမ်းမှုအတွက်အလို့ငှာဖြည့်နှောင့်နှေးနိုင်ပါတယ်။
သို့သော်ယခုအချိန်အထိအားဖြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစားပွဲပေါ်မှာပွဲစားများနှင့် ECN / STP ပွဲစားများအကြားအကြီးမားဆုံးကွာခြားချက်ကသူတို့ဖောက်သည်ဆန့်ကျင်အကျိုးသက်ရောက်မှုအလောင်းအစားထဲမှာဆက်ဆံစားပွဲပေါ်မှာပွဲစားဆိုတဲ့အချက်ကိုပါပဲ။ အဆိုပါဖောက်ကားစားပွဲခုံကို client အနိုင်ရရှိပါလျှင်ထို့နောက်ပွဲစားရှုံး, သူတို့ကထိထိရောက်ရောက် client ကိုဆန့်ကျင်အလောင်းအစားနေကြသည်။ အငြင်းအခုံကြီးမား volumes ကိုအတူဆက်ဆံစားပွဲပေါ်မှာပွဲစားရလဒ်ကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကြားနေကြောင်းကိုရှေ့ဆက်ထားနိုင်နေတုန်းအခုတော့ဆိုတဲ့အချက်ကိုတစ်ဦးဆက်ဆံရာတွင်စားပွဲပေါ်မှာပွဲစား client ကိုရှုံးပါလျှင်အကျိုးရှာနေတဲ့အနေအထားကိုယူပြီးကြောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။
တစ်ဦး ECN / STP မော်ဒယ်နှင့်အတူန့်မဆိုပေးထားသောအချိန်မှာစစ်မှန်တဲ့စျေးကွက်အခြေအနေများနှင့်ငွေဖြစ်လွယ်ပံ့ပိုးပေးခွငျးအားဖွငျ့ပေးကိုးကားပေါ် မူတည်. variable ကိုပါ၏ ယင်းအီလက်ထရောနစ် configured ကွန်ယက်အထောက်အကူပြုတဲ့သူကိုအဓိကဘဏ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သည်ဟု။ ကုန်သည်ကြီးများကုန်သွယ်ရေးနှုန်းသေးငယ်တဲ့အရောင်းအဝယ်အခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်းနှင့်စွဲချက်တင်ခြင်းမရှိကော်မရှင်ယေဘုယျအားဖြင့်လည်းမရှိ။ အဆိုပါ ECN / STP ပွဲစားနှင့်အတူသူတို့က, ကုန်သည်များနှင့်စျေးကွက်အကြားတစ်ဦးပြွန်တစ်ဦးတံတားဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါကုန်သည်အဘယ်သူမျှမဆီးတားမရှိဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းနှင့်မျှဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနှင့်အတူအီလက်ထရောနစ် configured စျေးကွက်အရပျကနေတဆင့်စျေးကွက်မှဖြောင့်မှတဆင့်ရရှိသွားတဲ့။ အဆိုပါစျေးနှုန်းများကွန်ယက်, အမျှဝေသူအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနေတဲ့ငွေဖြစ်လွယ်ရေကူးကန်မှလာကြ၏။
အဆိုပါ ECN / STP မော်ဒယ်နှင့်အတူမည်သည့် Re-ကိုးကားအဲဒီမှာဘယ်တော့မှဖြစ်ပါသည်, အားလုံးအမိန့်တစ်စုံတစ်ရာပေးသောအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောစျေးနှုန်းမှာပြည့်ရကြ၏။ ရံဖန်ရံခါကဤကိုးကားသည့် ECN အတွင်းလှုပ်ရှားမှု၏အသံအတိုးအကျယ်ပေါ် မူတည်. တစ်ဦး PIP ၏သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းသကဲ့သို့အနိမ့်ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကောင်းသောတန်ဖိုးကို, ဖြစ်ကောင်း 0.1 နိုင်ပါတယ်နှင့်တစ်ခု ECN / STP ပွဲစားကနေတဆင့်ကုန်သွယ်နောက်ထပ် key ကိုအကျိုးရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဘော်တတ်၏ စျေးကွက်၏အတိမ်အနက်ကို။